‘सरकारले ल्याएको बजेट फलदायी’ – Saurahaonline.com
‘सरकारले ल्याएको बजेट फलदायी’
सौराहा अनलाइन | २०७३, २२ जेष्ठ शनिबार
चितवन, २२ जेठ । अर्थविद एवं नेकपा एमाले केन्द्रिय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कण्डेलले सरकारले ल्याएको बजेट स्वाधिनता र आत्मनिर्भरका लागि फलदायी सावित हुने दावी गरेका छन् ।
नेकपा एमाले निकटको नेपाल बुद्धिजीवि परिषद चितवनले शनिबार भरतपुरमा आयोजना गरेको बजेट आव २०७३, ०७४ को बार्षिक बजेट यसको सान्र्दभिकता सम्वन्धि अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. कण्डेलले सरकारले राजश्वको चुहावट नियन्त्रण गर्न सके राजश्व लक्ष्य अनुरुप उठाउन सकिने वताए । बजेटमा राजश्वको स्रोतबाट उठाउने भनेको ५ खर्व ६५ अर्व र बैदेशिक क्रण १ खर्व ९५ अर्व उठाउन सक्ने आशंका ब्यक्त भएपनि सरकारले चाहेमा पुरा गर्न सक्ने डा. कण्डेलको दावी छ ।
उनले बजेटले समग्र सवै क्षेत्रका जनतालाई कुनै न कुनै रुपमा समेटेको भन्दै अवको १० बर्षमा बन्ने बजेट अहिलेकै बजेट र शीर्षकमा केन्द्रित हुने वताए । “बजेटले आर्थिक सम्वृद्धिको प्रस्थानविन्दुका रुपमा ठुला परियोजनाहरु आफैले लगानी गरेर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ” डा. कण्डेलले भने, “भारतवेष्टिक देशबाट भूपरिवेष्टिक नेपाल मात्र बनाउन उत्तरी छिमेकी चिनसँगका सडक बिस्तारमा जोड दिएको छ । ”
कार्यक्रममा बोल्दै एमाले चितवनका अध्यक्ष जगन्नाथ थपलियाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि पछि गिर्दै गएको नेपाली स्वाभिमान र राष्ट्रियता प्रधानमन्त्रि केपीको दृढ अठोट र संकल्पबाट उठेको वताए । “भारतले नेपालको माइक्रोलेभलमा पुगेर हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्था थियो, हामी भारतिय हस्तक्षेपबाट आजित भएका थियौ,” एमाले अध्यक्ष थपलियाले भने, “तर प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले भारतिय हस्तक्षेपको जनताको साथ लिएर दृढता र बुद्धिमत्ता ढंगले अन्त्य गर्नुभएको छ ।”
सरकारले ल्याएको बजेट जनताको गाँउ घर घरमा, आँगनमा ,खेतवारीमा पुग्ने खालेको भएको थपलियाले दावी गरे । बुद्धिजीवि परिषद चितवनका अध्यक्ष दिपक प्रकाश सिवाकोटी अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा डा. कल्याणी मिश्र, टेक बहादुर थापा, सहदेव लकान्द्री लगायतले बोलेका थिए ।